Sideey u arkaan Siyaasiyiinta Soomaalida ah Xariga Xuseen Caydiid.
Gabdhaha Somaliyed ee dalka Mareykanka oo dhaleeceeyay Xarigga Xuseen Ceydiid Baaqna u diray Ergadda shirka Mbagathi.Maxayse Ku dhaheen Baqooda?
C/qaasim oo ka dagay Tunisia. Iyo Shirkii Jaamacadda Carabta oo saaka si rasmiya u billawday.
Qaramadda Midoobay oo wal wal ka muujisay Dagaaladda Muqdisho iyo Jubbooyinka.
Siyaasiyiinta Soomaalida ah ee ka qayb galaysa Shirka Kenya ayaa cambaareeyay Xariga loo gaystay Hogaamiye Kooxeedka Xuseen Caydiid.
Col C/laahi Yuusuf Axmed oo madax ka ah Maamul Gobaleedka Punt Land ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday warka sheegaya in la xiray Xuseen Maxamed Caydiid oo uu sheegay inuu laf dhabar u ahaa geedi socodka Nabadda Somalia. Wuxuuna sheegay in Xariga Caydiid uu yahay Gabood fal loo gaystay Hogaamiyayaasha Kooxaha Soomaalida sidaas darteedna ay Go’aan cad qaadan doonaan haddii aan si deg deg ah loo sii dayn.
Col Xasan Shaatigaduud oo ka mida Guddoonka Wareega ee Golaha SRRC ayaa isna ku tilmaamay wax laga xumaado xariga loo gaystay Xuseen Caydiid. Wuxuuna sheegay in Golahooda uu war cad ka soo saaray xarigaasi. Isla markaana ay rajaynayaan in ugu dambayn la soo dayn doono Caydiid Maalinta Isniinta ah. Laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu qeexo Tallaabadda uu Golahooda ka qaadanayo haddii la soo dayn waayo Caydiid.
Guddoomiyaha Gobalka Shabeeladda Hoose. Shiiq Yuusuf Indhacade ayaa isna si kulul u cambaareeyay Dawladda Kenya oo uu sheegay inay ku xadgudubtay Xeerarka Caalamiga ee Diblomaasiyadda. Wuxuuna ka dalbaday Indhacade Hogaamiyayaasha Soomaalida ah iyo Ergooyinka ku sugan Nairobi inay si deg deg ah uga soo Baxaan Kenya kuna soo laabtaan Gudaha Dalkooda.
Isbahaysiga SNA ee uu hogaamiyo Caydiid ayaa iyaguna carro wayn ka muujiyay Tallaabada ay Kenya ku xirtay Hogaamiyahooda. Waxayna ku tilmaameen Shirqool Siyaasadeed oo la doonayo in lagu caburiyo Fikradda Siyaasadeed ee Hogaamiyahooda.
Eng Naaleeye oo ka mida Ku Xigeenadda Xuseen Caydiid ee ku sugan Kenya ayaa isna sheegay inay dadaal wayn ugu jiraan sidii loo sii dayn lahaa Guddoomiyahooda. Wuxuuna sheegay in lagu xiray Shirqool Siyaasadeed oo ay ka dambayso Dawladda Kenya.
Naaleeye waxa uu sheegay inuu Caydiid ka hor yimid doodii Kenya ee ahayd in daymo badan lagu yeeshay intii uu dalkeeda ka socday Shirka Kenya. Wuxuuna sidoo kale sheegay inuu ololaynayay in Madasha Shirka laga wareejiyo Kenya. Laakiin wax yar kadib markiii uu ka yimid Uganda ayuu sheegay inay Kenya xabsiga u taxaabtay si uusan Afkaartiisa Siyaasadeed ugu gudbin Wasiiradda Arrimaha Dibadda ee IGAD.
Taageerayaasha Isbahaysiga SNA ee Muqdisho ayaa iyaguna shalay illaa iyo xalay oo dhan cod baahiyayaal la dhex wareegayay Waddooyinka Waawayn ee Muqdisho iyagoo ku baaqayay in laga soo qayb gallo dibad bax wayn oo maanta ka dhacay Villa Somalia kaasoo looga dan leeyahay in lagu muujiyo sida looga xun yahay Go’aanka Guracan ee Maxkamad ku taala Kenya ay ku amartay in la xiro Xuseen Caydiid oo ku joogay Nairobi Martiqaad Diblomaasiyadeed.
Xuseen Caydiid oo ah Hogaamiye Da’a yar oo ka dhaxlay Mansabka Siyaasadeed ee uu ku gor gortomo Aabihiis Marxuum Jen Maxamed Faarax Caydiid ayaa ku taamayay inuu mar uun noqdo Madaxwayne ay Soomaali oo dhan isku raacsantahay laakiin Hankiisii Siyaasadeed ayaa waxaa dhabar jab ku noqday Xariga lama filaanka ah. Kadib markii uu Ganacsade Ijaaz Xuseen Ganijee oo Kenyan asalkiisu yahay Asian ku sheegtay Adduun dhan 185 kun oo Doolar.
Haweenka Somaliyeed ee Ku nool dalka Mareykanka ayaa si kulul u Cambaareeyay Xarigga Xuseen Max,ed Ceydiid oo ay ku tilmaameen mid lagu bahdilayo Magaca iyo Mas,uuliyiinta Somaliyeed,haweenka Waxaa kale oo Warsaxaafadeedkoodda u dhigeen sidan;
Annagoo ku hadleyna magaca gabdho soomaliyeed oo jooga dalka mareykanka, waxaan aad iyo aad uga xumaaney falalka foosha xun oo lagula kacaayo ka qayb galayaasha shirka daraja deey doonaanba ha lahaadaane oo ah wax aan loo adkeysan karin magacii soomaaliyeed meel ka dhac weyn loogu geysanaayo taasna aan u maleyneyno in kas iyo ula kac loo sameeynaayo waxaa intaas dhagaheena maqlaayaan wax xun iyo ceeb oo aan ka Naxno .
Waxaan beryahaan maqleynay cuntaa laga gostay ,hoteladii baa laga xiray ,waxaan aad iyo aad uga xunahay damiir xumada aad meesha lafadhidaan oo aad soo fadhi xuntihiin ayadoo waxaas oo dhan la idinku sameeyey,war idinkuba isuma dul qaadataane maxaad ugu dulqaada neysaa cabiidkaan raba inuu idin sii cabiidsado, wax dan ah oo idiinku jirtana malaha oo waaba ka raja dhignay ee midhaa idinkaa meesha xabadaha uga dhuumanaaya, ama qaarkiina qayila ayaa meesha u bogoyoo qaad ka helay, war heedhaha magacii aad hoos u rideen soo celiya oo ceebta naga dhaqa maxaa idinku dhacay.
dhamaan Gabdhaha Somaliyed ee ku Nool dalka kenya hadaan nahay waxaan aad uga xunahay dhibaatadda iyo Magac Xumida idin heeysataa,waxaan aad u dhaleeceeynaynaa Xarigga lagu heesto Mas,uulka sare ee Somaliyed falkaas oo aan dibad baxyo ka dhigi doono hadaan nahay haweenka Somaliyed ee dalka Mareynkanka waxaana dhaleeceeyn xun ujeedineeynaa laaluush qaatayaasha Reer kenya oo aan xitaa aqoon ixtiraamka martinimo.
Somaliyeey kaca oo iskaashadda Africa iyo Yurub Waxba idiinma heeyseeeeeeeeee
Maana sheekh cismaan
Waxaa SomaliTalksoo gaarsiiyey Dahir Alasow
XUSEEN MAXAMED CEYDIID OO LOO TAXAABAY XABSI KU YAALLA MAGAALLADA NAIROBI
Shir Madaxeedkii Jaamacadda Carabta ayaa si rasmiya uga furmay Maanta Magaaladda Tunis ee Dalka Tunisia. Iyadoo dhinaca Soomaaliyana uu shirkaasi uga qayb galayo Madaxwaynaha Dawladda Ku Meel Gaarka ah ee Somalia, C/qaasim Salaad Xasan.
Shir Madaxeedka Jaamacadda Carabta oo Bishii March ee Sannadkan ay Tunisia baajisay kadib markii ay dalalka Carabta Siyaasad ahaan ku kala qayb sameeen ayaa haatan waxaa ka cudurdaartay ka qayb galkiisa Madax uu ka mid yahay Ninka iska leh Dhaxalka Boqortooyadda Sucuudiga. Amiir Cabdalla iyo Madaxwaynaha Sudan. Cumar Xasan Al-Bashiir.
Madaxwaynaha Tunisia oo saaka Shirkaasi furay ayaa sheegay in looga baahan yahay in Waddamada Carabta ay mawqif mid ah qaataan isla markaana meel iska dhigaan khilaafaadka Siyaasadeed ee u dhaxeeya. Wuxuuna sheegay in Dawladda dalkiisa ay u qaadatay go’aanka hakinta shirka Bishii March kadib markii ay aragtay in Shirka uu harayn doono Khilaaf ururka dhexdiisa ah. Sidaas darteedna ay muhiim tahay in marka hore la xaliya khilaafka.
Shirkan oo ay ka baaqsadeen Madax Muhiim ah oo ka tirsan Jaamacadda Carabta ayaa waxaa ajandayaasha ugu muhiimsan ee looga hadlayo ka mida Arrinta Isreal iyo Falastiin iyo Haysashadda Ciraaq ee Xulufadda uu Maraykanku horkacayo.
Waxaa kaloo la sheegay inay Madaxda Carabta isla soo qaadi doonaan Arrimaha Siyaasadda iyo Dhaqalaha. Iyadoo sidoo kalana Saraakiil ka tirsan Jaamacadda Carabtu ay sheegeen inay suuragal tahay in Ajandayaasha Shirka lagu soo darro Ballaarinta Hanaanka ay Siyaasadda uga qayb qaataan Siyaasadda. Taasoo keeni karto in Haweenka Carabtu ay door muuqda ku yeeshaan
Siyaasadaha Dalalkooda. Arrinta Syria oo uu Maraykanku sheegay inuu cunaqabatayn ku soo rogayna ayaa iyaduna ka mid noqon doonta Ajandayaasha ay Madaxda Carabtu isla soo qaadi doonaan.
C/qaasim oo ka mida Madaxda Carbeed ee shirkaasi ka qayb galaya ayaa isku diyaarinayaa inuu Khudbad ka jeediyo Berri galinka hore Shir Madaxeedkaasi. Iyadoo qudbadiisu inta badana ay la xiriiri doonto arrimaha Dib u Heshiisiinta Soomaalida. Iyo caqabadaha soo wajahay Shirka Kenya.
Goobta uu shirku saaka ka furmay ayaa ahayd meel si wayn loo adkeeyay Ammaankeeda. Waxaana isku gadaamay Ciidamadda Milatariga dalkaasi oo ay kor ka taageerayaan Diyaaradaha Qumaatiga u kaca. Iyadoo Koox Suxufiyiin ah oo ka kala yimid Caalamka isla markaana lagu marti qaaday shirkaasi la geeyay Goobta Shirka ka hor intii aysan tagin Madaxdu. Waxaana la amray inay yareeyaan Suxufiyiinta dhaq dhaqaaqooda.
Qaramadda Midoobay ayaa wel wel ka muujisay Dagaaladda ka soo cusboonaaday Magaaladda Muqdisho iyo meelo ka mida Somalia. Iyadoo Kooxaha Dagaaladaasi abaabulayana ka dalbatay inay si deg deg ah u joojiyaan Dagaaladda.
Ergayga Xoghayaha Guud ee Qaramadda Midoobay u qaabilsan Arrimaha Somalia. Winston Tubman iyo Xiriiriyaha Hawlaha Bini’aadanimo ee Somalia. Mixewell Gaylard ayaa hadal ay wadajir u soo saareen waxay ku sheegeen inay aad uga xun yihiin dagaaladda ka soo cusboonaaday Qaybo ka mida Muqdisho. Isla markaana ay dareemayaan Niyadjabka ay dagaaladaasi ku hayaan Shacabka Soomaaliyeed oo u ooman Nabad ka dhalata Dalkooda. Waxayna sidoo kale Wal wal ka muujiyay Dagaaladda Abaabulan ee ka socda Gobaladda Jubbooyinka oo ay ka dalbadeen dhinacyadda isku haya inay joojiyaan Dagaalka. Isuguna yimaadaan Miiska Wadahadalka.
Qaramadda Midoobay waxay xaqiijisay in dagaaladdii ka dhacay Muqdisho ay ku dhinteen 60 qof. Inkastoo wararka aan ka helnay intii uu dagaalku socday Isbitaaladda Muqdisho ay intaas ka badinayaan Dhimashadda dagaalka haddana waxay sheegeen in Lixdankaasi qof oo u badan Rayid iyo Barakicii ku yimid Qoysaskii daganaa Goobihii uu Dagaalku ka dhacay Masuuliyadooda lagula xisaabtami doono Horjoogayaasha Labada Dhinac ee dagaalamayay.
Maraykanka oo sheegay inay diyaarinayaan Hanaan ay Dalalka Bariga Afrika ku wadaagi karaan Macluumaadka dhinaca Sirdoonka.
Taliyaha Ciidamadda Maraykanka ee La Dagaalanka Argagixisadda Geeska Afrika. Jen Mastin Robeson ayaa sheegay inay dalalka ku yaala Gobalku ay u ballan qaadeen Maraykanka inay iskaashi kala yeelanayaan ololaha ka dhanka ah Argagixisadda.
Robeson waxa uu sheegay in Dalalka Bariga Afrika ay wadaagaan Macluumaadka Sirdoonka. Isla markaana ay dhinacooda siiyaan Tababaro ku aadan La dagaalaanka Argagixisadda. Wuxuuna sheegay in Ciidamadda La Dagaalanka Argagixisadda oo la sameeyay Bishii June Sannadkii 2001-da ay ka hawl galaan waddamadda Jabuuti. Eritrea. Ethiopia. Yemen. Sudan. Kenya. Iyo Somalia. Isagoo dhinaca kalana sheegay inay qorshaynayaan Hirgalinta Nidaam isku xira Dalalka Gobalka oo ay ku wadaagi karaan Macluumaadka Dhinaca Sirdoonka ah.
Robeson waxa uu sheegay inuusan aaminsanayn in Geeska Afrika ay joogaan Argagixiso xoogan. Laakiin waxa uu sheegay inaan la iska indha tiri Karin Xaqiiqada ah inay sii xoogaysanayaan haddii aan laga hortagin. Wuxuuna sheegay inay sii xoogaysanayaan dhaq dhaqaaqyadda Salafiyadda. Wahaabiyadda. Iyo Kooxaha Xag jirka ah ee Jihaadka aaminsan.
Janaraalku waxa uu sheegay in meelaha ay sida wayn Argagixisaddu ay ugu korayso ay ka mid tahay Somalia. Wuxuuna ku tir tirsiiyay Dalalka ku yaala Gobalka inay feejignaan dheeriya ka muujiyaan Dhaq dhaqaaqyadda Kooxaha Argagixisadda ah ay ka wadaan Somalia.
Weerar Is Miidaamin ah oo lala beegsaday Ciidamadda Maraykanka.
Hal Askari oo Maraykan ah ayaa dhintay. Saddex kalana dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax is miidaamin ah lala beegsaday Ciidamadda Maraykanka. Sida ay Baahisay Saaka Wakaaladda Wararka ee Rueters.
Weerarkan oo ka dhacay Koonfurta Baghdad ayaa sida ay sheegtay Reuters waxaa loo adeegsday gaari lagu soo rakibay Waxyaabaha Qarxa. Waxaana Ciidamadda Maraykanku ay billaabeen inay isku hareereeyaan Aaga uu Dagaalku ka dhacay. Iyagoo billaabay inay galaan Heegankii ugu sareeyay.
Dhinaca Kale waxaa isi soo taraysa Caradda ay ka muujinayaan Ciraaqiyiintu Tacadiyada isi soo taraya ee ay Ciidamadda Maraykanku kula kacayaan Maxaabiista Ciraaqiyiinta. Waxaana wali ay warbaahinta Caalamku si wayn u hadal Hayaan Warbixintii Xasaasiyadda lahayd ee ay soo bandhigtay Jariiradda Washington Post ee ka soo baxda Dalka Maraykanka.
Mohamed Jama oo ah Maxbuus Ciraaqiya oo ay soo xigatay Washington Post ayaa sheegay in lagu qasbi jiray inay u socdaan sida Eeyaha oo kale isla markaana u dhawaaqaan. Waxaana Wargayskaasi uu soo bandhigay Mohamed Jama oo uu ku socda Afarta Addin sida Xayawaanka oo kale.
Maraykanka oo horay u sheegan jiray inuu Ciraaq ku soo dabaalay Dimuquraadiyad isla markaana Saddaam Xuseen ku eedayn jiray inuu ku xadgudbo Xuquuqda Aadanaha ayaa isagu imminka ku kacay Falal Naxariis Darro ah oo ka baxsan Bini’aadanimadda. Iyadoo ay Qaramadda Midoobay iyo Hay’adaha Xuquuqda Aadanaha u doodana gaabis ka noqdeen inay ka hadlaan waxa ka dhacaya Ciraaq.
Faafin: SomaliTalk May 22, 2003
MAANSADA DOODWANAAG... GUJI